XOG MUHIIM AH: Maxay ka wada hadlayaan M/weyne Gaas & Waxgarad G Mudug oo kulan xasaasi ah leh? | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
XOG MUHIIM AH: Maxay ka wada hadlayaan M/weyne Gaas & Waxgarad G Mudug oo kulan xasaasi ah leh?
GAAALKACYO(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kusugan magaalada Gaalkacyo, waxaana uu kulamo kula leeyahay qeybaha kala duwan ee gobalka, gaar ahaana Odayaasha dhaqanka & Masuuliyiinta dawladda.
Madaxweynaha Puntland ayaa lafilayaa in uu la kulmo waxgaradka gobalka Mudug oo ay ka wada hadleen mashaariicda horumarineed ee laga hirgalinayo gobalka, dhanka Amaanka, Qorshaha Dibu dhiska madaarka Gaalkacyo & Arrimo muhiim ah.
Odayaasha dhaqanka ee magaalada ayaa doonaya in ay kala hadlaan arrimaha garoonka Gaalkacyo, kaas oo ay aad u hadal hayaan shacabka magaaladaas, oo doonaya in ay arkaan dhismaha madaarkan.
Sidaas oo kale Madaxweynaha & Odayaasha ayaa ka wada hadli doona dhaqaajinta dadaalada nabdeed ee labada dhinac Galmudug & Puntland, waxaana kaloo qorshaha ku jira arrimaha Abaaraha.
In ummadda wixii gargaar ah ee la awoodo lasiiyo, dibu kicinta matooro fadhiya iyo wax kasta la awoodo in gobalka lagu garab istaago ayaa kamid ah arrimaha dhanka Abaaraha ee laga hadli doono.
Madaxweynaha Puntland ayaa maalmahan kusugnaan doona magaalada Gaalkacyo, isagoo bilaabay qorshaha ku shaqeynta magaalooyinka Puntland, aana maamulka lagu koobin oo kaliya caasumada Puntland ee Garoowe, si siman ay Madaxdu ugu shaqeyso magaalooyinka oo dhan.